Thwebula Cookie Monster 3.47 – Vessoft
WindowsInthanethiAbanye be-intanethiCookie Monster
Ikhasi elisemthethweni: Cookie Monster
I-Wikipedia: Cookie Monster
Cookie Monster – isofthiwe uphathe amakhukhi esipheqululini athandwayo. Cookie Monster isekela iziphequluli, njenge-Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer njll software aqalaze uhlelo cookies futhi likuvumela ukususa ezingadingeki. Cookie Monster kwenza ukuba enze uhlu amafayela cookies, okungeke kususwe ngesikhathi yokuhlanza full. Isofthiwe ine enembile futhi kulula ukuyisebenzisa interface.
Ukuthola kanye nokususwa cookies
Ukusekela for iziphequluli popular
Uhlu cookies intandokazi
Thwebula Cookie Monster
Amazwana ku Cookie Monster
Cookie Monster software ehlobene
I-AOL Desktop – isofthiwe enezinsizakalo eziningi zewebhu ezakhelwe ngaphakathi zokufinyelela kalula kumakhasi akho e-web owathandayo nezinkundla zokuxhumana nomphakathi ngesiphequluli.
I-Filezilla – ithuluzi lokulanda nokulayisha amafayela kusuka kumaseva we-FTP. Isoftware isekela imisebenzi eminingi ewusizo nezinqubomgomo zokudlulisa ifayela okuphephile kumaseva.
isiphequluli seWebhu olusekela CSS futhi HTML namazinga eziphambili. Isofthiwe has a lot of amathuluzi ukuhlala ngempumelelo in inethiwekhi.
I-BriskBard – iqoqo lesoftware ukwenza imisebenzi yansuku zonke ku-inthanethi. Phakathi kwesoftware, kukhona isiphequluli, iklayenti le-imeyili, isidlali semidiya, iklayenti lokudluliswa kwedatha, njll.
Isenzo! – Ithuluzi lokuthwebula ividiyo kusuka esikrinini sakho sekhompyutha. Isoftware ivumela ukusakaza okwenziwa esikrinini kuya kumasevisi wevidiyo athandwayo.
I-DeepBurner – ithuluzi lokushisa ama-CD nama-DVD, yakha ama-CD alalelwayo futhi ishise isithombe se-ISO. Isoftware ingasebenza ngokushayela okuningi ngasikhathi sinye.
Lena ukukhipha unqulo wesivinini se-Panda nemikhiqizo yokuphepha. Umbuso ususa ngokuphelele unqulo wesi arab kusuka ohlelweni, ngisho noma engekho kuhlu lwezinhlelo ezifakiwe.